चीन उच्च गुणवत्ता प्रो टी आउटलाइनर ब्लेड निर्माता र आपूर्तिकर्ता - BESTBOMG
घर > उत्पादनहरू > कपाल क्लिपर ब्लेड > एन्डिस टी आउटलाइनर ब्लेडहरू
एन्डिस टी आउटलाइनर ब्लेडहरू
IT फिट मोडल: एन्डिस ब्ल्याकआउट्स, GTX, Andis T-outliner, Andis T-outliner Cordless
OL कूलर टेक्नोलोजी: सिरेमिक ब्लेड भन्दा ठ्याक्कै कूलर प्रदर्शन गर्नुहोस् हाम्रो स्टील ब्लेडको कम गर्मी ट्रान्सफर र फ्रिक्शन इन्डेक्सले तपाईंको T आउटलाइनरलाई सिरेमिक ब्लेडभन्दा% 75% कूलर काट्न मद्दत गर्दछ।
Uration अवधि: xx लामो लामो, लामो प्रविधिको इस्पात सामग्रीबाट बनेको छ किन्न लामो।
AS सहज स्थापना: यसले सानो चलिरहेको कटर ब्लेड बदल्छ। केवल ब्लेड बदल्नुहोस्।
RE प्रीमियम समर्थन - मैत्री वारंटी समर्थन कुनै पनि अन्य लागतको बिना समर्थन। छिटो र सहज पहुँच ग्राहक सेवा २ 24 घण्टा भित्र तपाईको समस्या समाधान गर्न।
फिट एन्डिस ब्ल्याकआउट्स
फिट्स एन्डिस जीटीएक्स
फिट Andis T-outliner
फिट एन्डिस टी-आउटलाइनर कर्डलेस
ब्लेडको लागि ० खाली ठाउँहरू स्थापना गर्नुहोस् र समायोजित गर्नुहोस्
१. एक स्क्रूड्रिभर प्रयोग गर्नुहोस्, ट्रिमरहरूबाट स्क्रू हटाउनुहोस्।
२.इन प्लेट स्थापना गर्नुहोस् र धातु गस्केट माथि राख्नुहोस्। र स्क्रू कडा नगर्नुहोस्, प्लेटको लागि सानो ठाउँ छोड्नुहोस्। त्यसैले प्लेट माथि र तल सार्न सक्छ। जसले मार्गनिर्देशन ब्लेडमा अधिक नजिकबाट सर्ने ब्लेडलाई सक्षम गर्न सक्दछ।
The. मार्गनिर्देशक ब्लेड तर्फ गइरहेको ब्लेड बनाउनुहोस्। त्यसोभए तपाईलाई फ्ल्याट सतह चाहिन्छ, यसलाई सपाट गर्नको लागि, गाईड ब्लेडको लागि अलि अलि परी बनाउनुहोस्, जस्तै १० डिग्री, त्यसैले चलिरहेको ब्लेड गाइड ब्लेड मुनिका अलि अलि हुन्छ। त्यो कोणबाट, शिकंजा कस। त्यसो भए तपाईले आफैंलाई काट्नु हुन्न किनकि चलिरहेको ब्लेड एकदमै चाँडो छ।
C. जाँच गर्नुहोस् यदि यो ठीक छ। तपाईंको औंला ब्लेड पार गर्न प्रयोग गर्नुहोस्, यदि यो सहज छ भने, समायोजन ठीक छ। यदि यो कुनै नराम्रो थियो, जसको मतलब चाल चालु ब्लेड गाईड ब्लेड भन्दा उच्च थियो, तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न धेरै समय लिन आवश्यक पर्दछ।
The. ब्लेडलाई ट्रिमर टाउकोमा रिट्याच गर्नुहोस्, र दुईवटा स्क्रूलाई कडा पार्नुहोस्,
हट ट्याग: प्रो टी रूपरेखा ब्लेड, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, थोक, खरीद, कारखाना, अनुकूलित, चीन, चीन मा निर्मित, सस्तो, छूट, कम मूल्य, छूट, मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण, नवीनतम, गुणवत्ता, उन्नत, पछिल्लो बिक्री, फैन्सी